175 milyan oo caruur ah waxaa saameyn ku yeelan doona isbedelka cimilada sanad walba | Saadaasha Shabakadda
175 milyan oo caruur ah waxaa saameyn ku yeelan doona isbedelka cimilada sanad walba
Isbeddelka cimilada, in kasta oo ay ku dambayn doonto innaga dhammaanteen, carruurta ayaa noqon doonta kooxda ugu nugul ee dadka. Heerkulka sare, hirarka kuleylka, abaaraha, daadadka, iyo sidoo kale tayada biyaha iyo hawada ayaa saameyn weyn ku yeelan doona kuwa yaryar, gaar ahaan meelaha ugu saboolsan.
Marka la gaaro 2030, waxaa la filayaa hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka beeraha inta u dhaxeysa 10 iyo 25%, kaasoo bixi doona ku dhowaad 95.000 dhimasho dheeraad ah oo carruurta ka yar 5 sano jir ah nafaqo darro darteed, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay UNICEF.
Adiga oo cunaya wax ka badan inta aan u baahanahay, ilaa ay wax iska beddelaan mooyee waxaan u baahanahay 1,6 meere si aan u qancino qaabka isticmaalkeena hada. Planet Earth maaha mid aan xad lahayn: biyaha, carrada, wax kasta oo aan aragno waxay leeyihiin xuduudo. Kordhinta dadka bini'aadamka ah, saameynta deegaanka ayaa ka sii weynaan doonta sidaa darteedna, kheyraadka la heli karo way yaraan doonaan. Kaliya maaha Afrika, laakiin adduunka oo dhan.
Sida laga soo xigtay agaasimaha Wacyigelinta iyo Siyaasadaha Carruurnimada ee Guddiga Isbaanishka ee UNICEF Maite Pacheco, »Isbedelka Cimilada wuxuu leeyahay awood uu ku wiiqo horumarka laga sameeyay badbaadada carruurta adduunka oo dhan sidoo kale wuxuu saameyn ku yeelanayaa carruurta Spain".
Dalka Isbaanishka, celceliska heer kulka wuxuu ku kici karaa 5 digrii Celsius sanadka 2050. Hadday taasi dhacdo, ilmaha dhiciska ah waxaa ku dhici kara dhibaato xagga neerfaha ah ama dhibaatooyin neefsashada ah. Sidoo kale, carruurta da'doodu ka yar tahay 14 sano waxaa loo dhigi karaa isbitaal sababaha caloosha iyo caloosha.
Smog magaalada Barcelona, ​​Spain
Carruurta iyo dhalinyarada ku nool badda dhexe ayaa aad u nugul: sare u kaca heerarka badda oo ka dhashay dhalaalidda tiirarka ayaa noloshooda khatar gelin doonta.
Dhinaca kale, heerkulka sii kordhaya wuxuu sababi doonaa xasaasiyad iyo cudurada neefsashada inay kordhaan. Saameyntan, oo ay uga sii dari doonto wasakheynta magaalooyinka, ayaa ku qasbi doonta isbitaalada iyo adeegyada caafimaadka inay la qabsadaan oo ay tallaabo qaadaan.
Waad akhrisan kartaa warbixinta Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » 175 milyan oo caruur ah waxaa saameyn ku yeelan doona isbedelka cimilada sanad walba
Isbedelka cimilada ayaa silsiladda cuntada ka dhigaysa mid aan waxtar badan yeelanayn